Amaphrojekthi we-13 ane-Raspberry Pi yendlu yethu, alula futhi alusizo kakhulu! | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Kuningi amaphrojekthi nge-Raspberry Pi Futhi ngenxa yeMagPi, njalo ngenyanga kunezinhlelo eziningi esingazenza ngeRaspberry Pi nemali encane. Kulokhu sizokhuluma ngabangama-20 amaphrojekthi esingawenza ngeRaspberry Pi yendlu yethu.
Amaphrojekthi enza ukuthi indlu isebenziseke kakhulu futhi isuke ngokusobala ekusetshenzisweni kweRaspberry Pi njenge-minipc, into sonke esiyaziyo manje. Le misebenzi eyenzelwe indlu kodwa akuwona kuphela amaphrojekthi akhona kulo mkhakha, yize zithandwa kakhulu.
1 Isikhungo Sezindaba Zasekhaya
2 Isango le-SSH
3 Bheka izilwane ezifuywayo
4 I-firewall yasekhaya
5 Ikhaya le-Google
6 I-Amazon Echo eyenziwe ekhaya
7 U-anyanisi Pi
8 I-KindleBerry Pi
9 Umshini we-Arcade
11 Ithempelesha qapha
12 Ukunisela okuzenzakalelayo
13 Ukuvula amalambu namanye amadivayisi
14 Isiteshi Sezulu
15 Isiteshi se-FM kutholakale kalula
16 Elekthronikhi yesilwane esiphakelayo
17 Ukulawulwa kwezwi egalaji lakho
18 Ikhamera yenzwa yokunyakaza
19 I-MoccaPi noma ikhofi elihle kakhulu elenziwe nge-Raspberry Pi
20 Ingadi enhle yedijithali
Isikhungo Sezindaba Zasekhaya
Usebenzisa i-Raspberry Pi futhi I-Raspbian ihlangene ne-Kodi singaba eshibhile futhi isikhungo semidiya esingabizi. Inqubo ilula futhi singayishintshela ku-OpenElec. Kunoma ikuphi, sizodinga kuphela i-Raspberry Pi, ikhebula le-hdmi to ixhume ku-TV yethu nakwikhibhodi engenantambo enamagundane akhelwe ngaphakathi ukwazi ukulawula izinketho zohlelo lokusebenza. Izindleko ziyabiza impela futhi-ke kuyinto ethokozisayo ekhaya.
Abaningi bethu badinga ukufinyelela ngaphandle kwamakhompyutha abo asekhaya namakhompyutha. Lokhu kungaba yindida yamakheli we-IP kanye nokuphepha kwenethiwekhi, ngakho-ke singakwazi sebenzisa i-Raspberry Pi ukuze ibe nekheli le-IP lomphakathi bese uxhuma ku nge-SSH ku-Raspberry Pi ezoba nokuxhumana namakhompyutha asendlini. Lawa makhompyutha azoba nekheli elizimele le-IP, ngakho-ke abantu bangaphandle ngeke bakwazi ukufinyelela kulo. Kule phrojekthi sizodinga kuphela i-Raspberry Pi kanye neRaspbian. Kuphela lokho.
Bheka izilwane ezifuywayo
Enye iphrojekthi ethokozisayo ye-Raspberry Pi siqukethe ukusebenzisa iPi Cam edumile ukuqapha izingane noma izilwane ezifuywayo. Kumele sixhume iPi Cam kuRaspberry Pi yethu bese sibeka ikhamera endaweni yokuqopha lapho isilwane noma ingane ikhona. Ngemuva kwalokho, ukubona ukuthi benzeni noma benzani Kumele sixhumane kuphela ne-Raspberry Pi nge-SSH noma ngohlelo lokusebenza lwesilawuli kude ukubona okwenziwe noma okurekhodwayo.
Lokhu kuqapha isilwane kuyasiza emakhaya kepha kubuye kubize kakhulu kunamanye amaphrojekthi, ngoba kufanele sengeze intengo yePiCam entengo yeRaspberry Pi. Kunoma ikuphi kuyiphrojekthi ethokozisayo yasekhaya.
Sikhulume ngokufinyelela kumakhompyutha ethu ngaphandle kodwa futhi singenza i-Raspberry Pi ibe yisihlangu ekuhlaselweni kwangaphandle. Esimweni esinjalo sizodinga kuphela i-Raspberry Pi, ihabhu (uma sinamakhompyutha amaningi ane-wired connection) futhi Tor for Raspberry Pi.
Ngenxa kaTor nobuchwepheshe bayo "anyanisi", singaba nesicishamlilo esinamandla esingasivikeli nje kuphela ekuhlaselweni kepha futhi singenza ukuphequlula iwebhu okungaziwa. Kulokhu iphrojekthi isuselwa kwisoftware. KuRaspbian owaziwayo kufanele sengeze iTor nobuchwepheshe bayo. Okuthile okulula nokulula.
Abasizi ababonakalayo bayaqhubeka. Futhi kulokhu, lo mkhuba awuxhunyiwe kwi-hardware ethile kepha ungaba noma iyiphi idivayisi. Ngakho-ke noma ngubani angayenza le phrojekthi yeRaspbery Pi futhi dala umsizi wakho ngokubonga ku-Raspberry Pi. IGoogle kudala yangena ukusebenzisana neMagPi bethule ikhithi ye yakha amakhadibhodi Ikhaya leGoogle. Kuyiphrojekthi ethokozisayo futhi ewusizo yasekhaya. Kusanda kudalwa ukulungiswa okushintsha ifreyimu yamakhadibhodi nge- i-intercom yasekhaya kusukela kuma-80s.
I-Amazon Echo eyenziwe ekhaya
Uma iGoogle Home ijoyine i-Raspberry Pi, i-Amazon Echo ibikade incane futhi isikhathi eside ngaphambi kweGoogle besengivele sesizenzele eyethu i-Amazon Echo. U-Echo yisipikha esihlakaniphile esesibe yimfashini. Abasebenzisi bangazakhela eyethu i-Amazon Echo replica sibonga i-Raspberry Pi. Sekuyisikhathi eside kusukela sitshela indlela yokwakha ngayo futhi impela kuwumsebenzi omuhle ukuba nawo ekhaya. Le divayisi ingakwazi ngisho kube ngcono kunomkhiqizo wokuqala njengoba besingakwazi ukuwenza uthwaleke noma engeza ukwenza ngezifiso okungenayo idivayisi ye-Bezos.
Sike sakhuluma ngokwakha i-Firewall eyenziwe ngenxa ye-Raspberry Pi. I-anyanisi Pi inomsebenzi ofanayo, kepha ngokungafani nenye iphrojekthi, I-anyanisi Pi inikeza ukuphepha okukhulu uma sifuna ukufinyelela kusuka ngaphandle emaqenjini asendlini yethu. I-anyanisi Pi isebenzisa umthetho olandelwayo weTor Network, inethiwekhi esebenzisa ukusebenza kwezendlalelo zika-anyanisi ukunikela ukuphepha nobumfihlo obuningi kunokujwayelekile. Vuliwe lesi sixhumanisi Sikutshela ukuthi ungakha kanjani le phrojekthi.
Ikhompyutha iyigajethi ejwayelekile, ejwayelekile futhi edingekayo emakhaya. Okuthile okwakungafani neminyaka engama-30 edlule. Kunoma ikuphi, ngenxa yale phrojekthi ye-Raspberry Pi ne-eReader, singaba nekhompyutha eyisisekelo futhi enesikrini esifanele ukugwema ukulimaza impilo yamehlo ethu. Ngokungafani namanye amaphrojekthi, i-KindleBerry Pi iyathandeka ngeqiniso elilula lokuthi ungasebenzisa futhi igajethi njenge-eReader endala noma ukwazi ukuba ne-eReader nekhompyutha kugajethi eyodwa.
Emakhaya amaningi, igumbi lokudlala seliphenduke igumbi elibalulekile ekhaya. Imvamisa, usofa onethezekile namagajethi amaningi wokudlala anjengama-video consoles, izikhungo zemidiya, njll. Siphakamisa wena dala umshini we-arcade wangokwezifiso oqukethe imidlalo yevidiyo yempilo yonke njengeSuperMario Bros. Ngenxa ye-Raspberry Pi, singakha umshini we-arcade wesikhathi esidlule ngaphandle kokukhokha ama-pesetas angama-25 ababevame ukusicela umdlalo. Le midlalo ingashintshwa futhi izindleko, ngenxa yezinto ezenziwe kabusha kanye ne-Raspberry Pi Zero W, cishe zincane. Vuliwe lesi sixhumanisi Uzothola imininingwane eminingi ngokwakha umshini we-arcade wegumbi lethu lemidlalo.
Ukubuyela kuphrojekthi edlule, kulokhu sikhuluma ngokukhiqizwa kabusha kweGame Boy yokuqala. Lo mshini we-arcade ungadalwa ngokuphelele ngenxa ye-Raspberry Pi Zero W. Into enzima ngale phrojekthi ukudala ikesi. Kuphakathi kokuthi sisebenzisa umshini wokuqala wakudala noma besizophrinta ikesi ngephrinta ye-3D. Kepha, kude nalokhu, izindleko maqondana nokuzijabulisa ezikunikezayo ziphansi kakhulu. Kade sikhuluma nawe mayelana le phrojekthi kepha uma ufuna, kuma-Instructables uzothola amaphrojekthi amaningi afanayo anokuhluka okuncane.
Ukushisa kwekhaya kubaluleke kakhulu. Iziqu noma ezimbili zingasenza sisebenzise amakhulu ama-euro ngonyaka ukufudumeza noma ugesi. Ngakho-ke ukusetshenziswa kwesiqaphi sokushisa kungasiza kakhulu. Ngale Proyect Sizodinga i-Raspberry Pi, izinzwa zokushisa nesikrini se-LCD esibonisa ngokubonakalayo ukushisa kwegumbi ngalinye. Uma sifuna ukudala umshini wokushisa onembe kakhudlwana, singasebenzisa amabhodi e-Arduino ukwandisa izinzwa kulo lonke igumbi ekhaya, kepha nge-Raspberry Pi elula singathola imiphumela emihle. Vuliwe Okuhlelekile Uzothola eminye imininingwane ngale phrojekthi.
Ngezikhathi zemikhosi abaningi bavame ukuya eholidini. Umsebenzi odingekayo kepha osilethela izinkinga zasekhaya ngoba sidinga ukunisela izitshalo, ukondla izilwane ezifuywayo, njll. Kulokhu kukhona iphrojekthi yokuthi ngenxa yale phrojekthi ngeRaspberry Pi singaba nayo uhlelo lokunisela oluzenzakalelayo lwezitshalo zethu. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yomsebenzi we-Wi-Fi we-Raspberry Pi, singakwazi nokufeza lo msebenzi kusuka ku-smartphone yethu. Kulokhu Imiyalelo yekhasi Uzothola isoftware, uhlu lwezinto zokwakha kanye nomhlahlandlela wokwakha wale phrojekthi.
Ukuvula amalambu namanye amadivayisi
Phambilini sikhulume ngokwakha isibhengezo sasekhaya ukuze sikwazi ukuxhumana nabangaphandle. Le phrojekthi ihlongoza ukunika umsebenzi kuleyo firewall ngoba sizoyidinga uma sakha le phrojekthi. Ngenxa ye-Raspberry Pi namalambu ahlakaniphile, singakhanyisa amalambu endlini noma izinto ezithile ezivela ku-smartphone yethu. Singenza okufanayo nangezibani ezijwayelekile, kepha kulokhu kufanele sakhe i-adaptha "ebuyisela" smart kuma-bulb. Kumiyalo ongayithola umhlahlandlela wokwakha yale phrojekthi ethokozisayo, ngoba abangaphezu koyedwa bakhohliwe ukucisha amalambu Akunjalo?
Sisebenzisa isikrini, singakha kalula i- gcwalisa isiteshi sezulu sezulu esizosinikeza ulwazi oluningi njengokushisa, umswakama, umfutho womoya, imisebe ye-ultraviolet, amazinga wokukhanya, kanye namazinga e-nitrogen dioxide.
Uma futhi sikwazi ukulenza libe icala elihle nelinakekelwa kahle endlini yethu singaba nesiteshi sezulu esimangalisayo, ekuphakameni kwanoma yini esingayithola, ngokwesibonelo, e-Amazon.
Kulesi sixhumanisi une- imiyalo ukwehla ukuze usebenze ngokushesha.
Isiteshi se-FM kutholakale kalula
Uma ukuthanda kwakho kungumsakazo, sibonga i-Raspberry Pi, ikhebula elizosebenza njenge-antenna nombhalo wePython ozosivumela ukuthi sidlale umsindo, sizokwazi ukuba ngumethuli wohlelo oluncane abazokwazi ukulalela abangani bethu, isibonelo, ngemisakazo eseduze.
Ngenxa yale divayisi, ongayakha ngokusebenzisa lezi zinyathelo ezilandelayo, sizokwazi ukusakaza kuma-frequency aqala ku-1 MHz kuye ku-250 MHz, yize okuhle kungaba ukusakaza kuma-FM amaza (kusuka ku-87.5 MHz kuye ku-108.0 MHz). Futhi khumbula ukuthi kufanele uhloniphe ukusakazwa kweziteshi eziningi ezineziteshi ezisemthethweni ngaso sonke isikhathi.
LAPHA unemiyalo yokwakha isiteshi sakho se-FM.
Elekthronikhi yesilwane esiphakelayo
Ngaso sonke isikhathi lapho kufika amaholidi, inkinga yokuthi sizishiya kuphi noma nobani izilwane zethu nazo zivame ukufika. Ngenhlanhla yabo bonke abahlala namakati, bangabashiya bodwa, bathole umuntu ozobavakashela, noma ngabe ubanikeza uthando kanye ngosuku noma kanye ezinsukwini ezimbili. Futhi yilokho sibonga futhi ku-Raspberry Pi lapho sizokwazi ukudala owethu umphakeli ozenzakalelayo lokho kuzosabalalisa isilinganiso sokudla ngokuzenzakalela emakati ethu, noma kwesinye isilwane.
Iphrojekthi ibhabhadiswe njenge- Isiphakeli sekati yamandlaKuthuthukiswe nguDavid Bryan, kwamukelwa kabanzi futhi wonke umuntu uthanda ukulawula ukuthi izilwane ezifuywayo zidlani, noma ngabe useholidini. Uma futhi sifaka ikhamera yokubhekwa, futhi elawulwa sibonga ku-Raspberry Pi yethu, iphrojekthi ingaba mnandi kakhulu futhi ibe nenzuzo.
Ukulawulwa kwezwi egalaji lakho
Siri, umsizi wezwi owaziwayo ofakwa amadivayisi e-Apple ahlukene, angasisiza kule phrojekthi futhi vula umnyango wethu wegaraji ngomyalo wezwi. Sikuxwayisa ukuthi umsebenzi awulula, kepha umphumela umane ubabazeka futhi ngaphezu kwakho konke ukhululekile. Futhi ngukuthi asisoze saphuma emotweni ukuvula umnyango wegaraji, futhi ngethemba lokuthi ngeke siphinde sikhiphe ukhiye ewindini futhi ukuze siwuvule.
Ikhamera yenzwa yokunyakaza
Sesivele siyibonile imikhiqizo eminingi engenziwa nge-Raspberry Pi lapho iba khona ikhamera yokubhekwa, kepha sisengahamba isinyathelo esisodwa siqhubeke. Futhi ukuthi le divayisi enamandla isivumela ukuthi sakhe, kalula noma kancane kalula, a ikhamera yokuqapha ethola ukunyakaza, okungasivumela ukuthi sikwazi ukubona ukunyakaza okungenzeka ngaphakathi kwekhaya lethu.
Uma ungafuni ukunikeza ukunyakaza kokulawula lokho okusetshenziswayo, okungaba yinto encane, ungasisebenzisa njalo ukulawula ukuthi izilwane ezifuywayo zihamba zizungeza indlu noma ziye engadini.
En lesi sixhumanisi Unezinyathelo zonke okufanele uzilandele ukwakha eyakho ikhamera yokuzwa inzwa.
I-MoccaPi noma ikhofi elihle kakhulu elenziwe nge-Raspberry Pi
Lapho sithi ukusetshenziswa kwe-Raspberry Pi cishe akunamkhawulo, futhi yize abaningi bekungabaza, ngesaba kakhulu ukuthi besinephutha elilodwa. Futhi ukuthi le divayisi ethandwayo isivele ikwazile ukufinyelela ekhishini lethu ngesandla se- UMoccaPi, umenzi wekhofi ohlakaniphile ukwenza ikhofi noma itiye, ngokuya ngemibono yabo bonke abazamile, kuhle impela.
Intengo ephelele ayiphezulu kakhulu, futhi ukuthi uma sesizitholile zonke izakhi esizidingayo ukwakha lo mshini wekhofi onelukuluku, akufanele sidlule ngaphezu kwama-euro angama-80.
Uma ufuna ukuqala ukwakha iMoccaPi namuhla, nansi ifayili le- imiyalo ukuthi kufanele ulandele.
Ingadi enhle yedijithali
Uma uthanda izitshalo futhi ubungathanda ukuba nesiqeshana sendawo ukuze ube nensimu egcwele izimbali, kepha bekungeke kube njalo, mhlawumbe le phrojekthi ene-Raspberry Pi isondele kulokho obukade uphupha ngakho. Kungazwakala njengehlaya, kepha ngenxa yalezi zinsimbi ezinamandla esingazakha ngendlela elula ongacabanga ngayo, futhi nangekhono elincane, ingadi yedijithali lapho izimbali zihamba khona, izinyoni noma abagxeki bavela bezungeza izimbali noma lapho kukhona khona ngisho nokukhanyisa okumangazayo kusihlwa.
Kwividiyo ye-YouTube ongayibona ngaphezulu unayo yonke imiyalo (futhi kufayela le- isixhumanisi esilandelayo), yize usunayo i-RaspBerry Pi sincoma ukuthi usebenzise umcabango wakho ukwakha ingadi emangazayo nenhle ezophila noma kunini lapho ufuna khona.
I-RaspBerry Pi ihambile esikhathini esifushane ukusuka ekubeni yinto engaziwa emphakathini jikelele, yaba ithuluzi elibalulekile ngenani elikhulu lamaphrojekthi. Kule ndatshana sikukhombise okuncane okuhle ekhaya lakho, kepha ukusetshenziswa nokusetshenziswa kwale divayisi encane futhi engabizi cishe akupheli. Abantu abaningi bathi amathuba esinawo nge-RaspBerry Pi afinyelela emcabangweni wakho nasekhonweni lokusungula nokusebenza ngawo.
Ngabe udale iphrojekthi nge-RaspBerry Pi yekhaya lakho ocabanga ukuthi ifanele ukuvela kulolu hlu?. Uma kunjalo, sazise nge-imeyili yokuxhumana noma isikhala esibekelwe ukuphawula kulokhu okuthunyelwe futhi sizokufaka ohlwini.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Ukusajingijolo Pi » Amaphrojekthi we-Raspberry Pi
UJosé María Díaz waseSan Pedro Riera kusho
Nginesikhungo semidiya esineRaspbery pi nokusatshalaliswa kweLibreElec (i-linux encane ene-Kodi eyakhelwe ngaphakathi). Kuyinto kanokusho futhi - ngesicelo samahhala se-android esibizwa ngeKore, ungayilawula kusuka kufoni yakho ephathekayo… Bekungeke kushibhile.
Phendula uJosé María Díaz waseSan Pedro Riera
Ngihlanganisa i-feeder kodwa izinja zami ezingakwazi ukufinyelela okuthile ngaphandle kokhonkolo noma insimbi ngoba ziyakonakalisa futhi nendlela yokukhipha ukudla kuphrojekthi oyithumelayo iyathakazelisa, yize inganembi. Ngisebenzisa i-ESP32 elawula i-servo force engu-64kg elalela isiphakeli se-raspberry ukuze ikwazi ukwanda kangcono. Ngcono uhlukanise isikhombimsebenzisi se-api ekusebenzeni okuqondile.